NS_RKTV9 – NEW STARS MYANMAR
Nov 21, 2018 Zin Minn Lahtrktv
စားသောက်ဆိုင်နှင့် ကေတီဗီလုပ်ငန်းသုံး ဆော့ဖ်ဝဲလ် (၉) ကြိမ်မြောက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီမှုကို ယခုပင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး စမ်းသပ်သုံးစွဲနိုင်ကြပါပြီ … ။
Restaurant & KTV Management Software (Version 9) Free Download Now !
New Stars Myanmar Software သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ Facebook ပေါ်တွင် Software Package Link ပေး၍ စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲစမ်းသပ်ခွင့်ပေးသည့် ပထမဦးဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသော Software Provider ဖြစ်ပါသည်။
ယခု Software သည် ကွန်ပျူတာအပြင် ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များအသုံးပြု၍ အော်ဒါမှာယူလို့ရသလို
စားသောက်ဆိုင်နှင့် ကေတီဗီများအတွက် ပါသင့်ပါထိုက်သော စာရင်းကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့်
Stock ဝင် /ထွက်/ လက်ကျန်အပြင် တစ်နေ့စာ အရောင်း/အဝယ် စသည့် အကောင့်ပိုင်းဆိုင်ရာများ
အများနည်းတူပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကေတီဗီပိုင်းတွင် Vocal နှင့် ရှင်းရန် အစားအသောက်နှင့် ဆက်ရှင် % များကို အော်တိုတွက်ပေးပြီး Print Location5နေရာအထိ ခွဲ၍ ထုတ်နိုင်သလို Sub Counter အခွဲများ ကြိုက်သလောက်ခွဲ၍သုံးနိုင်သည်။ စက်အလုံးရေ ဖုန်း/တက်ဘလက်အလုံးရေ ကန့်သတ်ထားခြင်းမျိုးမရှိပါ။
အစားအသောက်များအတွက် ဟင်းပွဲတစ်ပွဲလျှင် ပါဝင်သည့်အချိုးအစားကို ဖော်မြူလာထည့်ပြီး တစ်ပွဲထွက်သည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာကို အလိုအလျှောက်လျှော့ချပေးခြင်းစနစ်ပါဝင်သည့်အတွက် ကုန်စိမ်း၏လက်ကျန်ကို အနီးစပ်ဆုံး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Build in Gmail စနစ်ပါဝင်သည့်အတွက် Report များကို One Click ဖြင့် Gmail တင်နိုင်ပါသည်။
ဆော့ဖ်ဝဲလ်အား စမ်းသပ်သုံးစွဲပြသော Video Tutorial သည် အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဖြစ်ပါသည်။
Video Tutorials (You Tube) Link :
ဆော့ဖ်ဝဲလ်အား ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန် လင့်ခ်များသည် အောက်ပါလင့်ခ်များဖြစ်ပါသည်။
Windows – 10 (64) bit verison-1903 နောက်ဆုံးအထိ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
P Cloud Link :
Android အသုံးပြုရန်အတွက် Server နှင့် Local Wi-Fi (internet မလို) ချိတ်ဆက်ထားမှသာစမ်း၍ ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ယခု Software Package အတွင်းတွင် Android apk မထည့်ပေးထားပါ။
Software သည် ရက် (၃၀) စမ်းသပ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထို့ထက်ပိုပြီး စမ်းသပ်လိုပါက ဖုန်းဆက်လျှင် သက်တမ်းတိုးပေးပါမည်။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမရပါက Chat Box တွင် လှမ်းတောင်းနိုင်ပါသည်။
Anydesk ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် Online မှ အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။
Software Price မှာ 650000 Ks ဖြစ်ပြီး Training အပြည့်အ၀ပါဝင်ကာ (ရန်ကုန်မြို့တွင်း) ဆိုင်ထိလာရောက်တပ်ဆင် သင်ကြားပေးပါသည်။ Facebook ပေါ်ရှိ Video သည် Quick Demo ဖြစ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံကို ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ကြည့်ရှုစမ်းသပ်နိုင်သလို … အသေးစိတ် မေးခွန်းများကို ဖုန်း – 09778884080 သို့ ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းနိုင်သလို ရုံးချိန်အတွင်း ရုံးသို့လာ၍လည်း စမ်းသပ်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 🙂
NEW STARS MYANMAR SOFTWARE Co.,Ltd.
Ph : 09778884080, 0943065913